फेरि घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नुहोस् – Hamro Nepali Samachar
Home/ आर्थिक/फेरि घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं / बुधबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । मंगलबार तोलामा ८ सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य आज पनि तोलामा ४ सय रुपैयाले घटेको हो ।
मंगलबार तोलाको ९३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ९२ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि घटेर प्रतितोला ९२ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १० रुपैयाले बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १२ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
अन्य समाचार | काठमाडौं । दुबईका अर्बपति शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतुम र उनकी पूर्व पत्नी प्रिन्सेस हया बिन्त अल हुसेनबीच सम्बन्ध विच्छेदका लागि अनुमति प्राप्त भएको छ । तर यस अनुमतिमा दुबईका शासक मकतुमले ५० करोड पाउण्ड अर्थात करिब ८० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम पूर्व पत्नीलाई दिनुपर्ने भएको छ ।
यसलाई बेलायती कानुनी इतिहासमा तलाक(सम्बन्धविच्छेद)को सबैभन्दा ठूलो घटना रुपमा लिइएको बीबीसीले जनाएको छ ।
हाया आफ्ना छोराछोरीका साथ २०१९ मा दुबईबाट भागर बेलायत पुगेकी थिइन् । उनले पतिबाट आफ्नो ज्यानमा खतरा भएको बताएकी थिइन् ।